जापानको आधा भन्दा बढी सहर हराउन सक्छ; कारण भने ग्लोबल वार्मिङ्ग होइन | Japan Info - नेपाली
Japan Info > Japan Info - नेपाली > CULTURE > जापानको आधा भन्दा बढी सहर हराउन सक्छ; कारण भने ग्लोबल वार्मिङ्ग होइन
थोमस रोबर्ट माल्थसलाई चिन्नु हुन्छ ? उनको एन एसे अन द प्रिन्सिपल अफ पपुलेसनले सन् १७९८ मा तहल्का मचाएको थियो। उनले यो संसारमा रहेको श्रोत साधन असिमित नभएकोले जनसंख्या वृद्धिले भोकमरी पैदा हुने हुनाले यो जनसंख्या वृद्धिमा रोक लगाउन अनेक उपाए गर्नु पर्छ भनेका थिए। आज दुइ शताब्दी पछि हामीसंग माल्थसलाई गलत पुष्टि गर्न थुप्रै तथ्यहरु छन्। जनसंख्या वृद्धि संगै टेक्नोलोजी र कृषिमा भएको बिकाशले माल्थसको सिद्धान्त साचो हुन त पाएन उल्टो केहि देशहरु सोच्दै नसोचेको समस्याबाट ग्रषित भए। जनसंख्यामा गिरावट आधुनिक विस्वको हो समस्या हो। यो समस्या बाट जापान निकै ग्रषित छ। डेमोग्राफिक ट्रान्जिसन ग्राफ हेर्ने हो भने जापान अहिले ५औ चरणमा छ। यो चरणमा जन्म दर भन्दा मृत्यु दर धेरै हुन्छ जसले गर्दा जनसंख्या गिरावटको समस्या झन् विकराल बन्दै जानेछ।
नीति निर्माताहरुको लागि चुनौती
यो स्थिति कति भयावहक छ त् ? शोधकर्ताहरूको अनुसार विकशित राष्ट्रहरुले जनसंख्या गिरावटको समस्या भोग्नु प्राकृतिक हो र केहि वर्षमा जनसंख्या आफ्नो पहिलेको स्थीतिमा आउदछ। यो भनाई एक अर्थमा साचो पनि हो किनकि अमेरिकामा पनि यहि प्याटर्न देखिएको थियो। घटी रहेको जनसंख्या फर्केर प्राकृतिक दरमा आएको थियो। तथापि जापानको स्थिति हेर्नेहो भने अमेरिका संग बिल्कुलै फरक भएको देखिन्छ। जापानको २०१७को जनसंख्या वृद्धि दर -०.२% थियो भने २०१८को प्रजनन दर १.४२ प्रति महिला रहेको थियो। वृद्धि दर प्राकृतिक दर २.१% भन्दा न्युन मात्रा नभएर माइनसमा रहेको छ। न्युन प्रजनन दर पनि सामाजिक समस्या बनेको छ। हुन पनि जनसंख्या नै स्थाई भएन भने त्यो देशको अर्थतन्त्र पनि कति स्थिर रहला ?
जनाताले नै देशको अर्थ तन्त्र धानेका हुन्छन। यी जनता उत्पादक, निर्माता, श्रमिक, ग्राहक र उपभोक्ता हुन्। जापानको अहिले जनसंख्या बुढेसकाल तिर जादै छ। दुर्भाग्यको कुरा यो बुढ्यौली जनसंख्यालाई फेर बादल गर्नको लागि चाहिने नया युबा र बालबालिकाको यहाँ कमि हुदै छ। सोधकर्ता मसुदा (जनवरी २०, २०१४) लेख्छन येही क्रममा जनसंख्यामा गिरावट आउने हो भने अबको दुई दशकमा जापानका प्रमुख सहर बहिराका आधा नगरपालिकाहरु हराएर जाने छन्। ति वस्तीमा मानब निर्मित साधन हुने छन् तर उपभोग गर्न मानिस हुने छैनन्।
न्युन प्रजनन दरका कारण
न्युन प्रजननका थुप्रै कारणहरु हुन्छन। जापानमा देखिने प्रमुख कारण चाहि युवा हरुले ढिलो बिवाह गर्नु हो। अध्यानले थुप्रै जापानीहरु त बिवाह नै गर्दैन भन्ने देखाउछ। जापानमा सिंगल स्ट्याटस हुने मानिसहरु दिन प्रतिदिन बढ्दै छ। महिलाहरुले दिलो बिबाह गर्ने बित्तिकै आफ्नो पुरा प्रजन क्षमता (फ़र्टिलिटि स्प्यान) प्रयोग गर्न पाउदैनन। महिलाहरुको ढिलो बिबाह पछाडीको कारणमा श्रीमती र आमा बनि सके पछि आउने पारिवारिक र सामाजिक जिम्मेवारी हो। स्थिर आम्दानी अर्को कारण बन्न सक्छ। बिबाह गर्नु भनेको अनेकौ खर्च बढ्नु हो। यहि कारणले बरु एक्लै बस्न जापानी युवाहरु रुचाउदैछन।
त्यसैगरि बिस्तारै बुढो उमेरका मानिसको संख्या जापानमा बढ्दै छ। परिवारलाई एकै चोटी बच्चा र वृद्दहरुको हेरविचार गर्न निकै गाह्रो हुने हुनाले बिबाह गरेपछि पनि पहिलो बच्चा जन्माउने समय निकै ढिलो हुने हुन्छ। ओईसिडि को अध्ययनले जापानी पुरुषहरु अफिसको काममा थुप्रो समय व्यतित गर्ने हुन्छन। ओभर टाईम धेरै घण्टा हुने जापानमा पुरुषहरु महिलालाई घरको काम गर्न नसघाउने देखिन्छ। यो काम गर्ने बिबाहित महिलाको लागि निकै निराशाजनक कुरा हो। घरको काम, बच्चा, बृद्ध, करियर सबैको एकै चोटी ख्याल गर्नु पर्ने हुनाले बिबाहनै नगर्नु उचित सोच्छन।
प्रजनन दर बढाउन लागु गरिएका नीति
जापान सरकारले प्रजनन दरको समस्या समाधान गर्न थुप्रै नीति नियम लिएर आएको छ। दुवै अविभावक काम गर्ने घरमा बच्चालाई पर्याप्त समय दिन नसकिने होकी भन्ने सोच हुन्छ। जापानी सरकारले युवा युवतीहरुलाई बिबाहको लागि प्रेरित गर्न रोजगारीको सुनिस्चितता जस्ता नीति लिएर आएको छ। जापान टाईम्सको लेख अनुसार जापनी सरकारले नगरपालिकाको मर्फात म्याचमेकिङ्ग प्रोग्रामहरु सुरु गरेको छ। यो प्रोग्रामले मानिसलाई आफ्नो पार्टनर खोज्न सजिलो भई जापानमा अहिले रहेको बिबाह नगर्नेको अनुपातमा कमि ल्याउने विश्वास गरिएको छ।
“इकुमेन नै इकेमेन हो” भन्ने क्याम्पेन पनि सुरु गरिएको छ। इकुमेन भनेको महिला सरि बच्चा हुर्काउन जिम्मेवार भएको पुरुष हो। अनि इकेमेन भनेको चाहि जापानीमा ह्यान्डसम पुरुष हो। यो क्याम्पेन पूर्ण रुपमा सार्थक बनाउन पुरुषहरुले अफिसमा गर्ने कामको समय घटाउने नीति सरकारले लिएर आएको छ। त्यसो गर्नाले पुरुषहरुले पनि बच्चाको हेरविचार गर्ने र महिलाहरुको कामको लोड कम हुने सोचिएको छ। मेरो बिचारमा जापान सरकारले बच्चाहरुको कियर गर्ने मनटेस्वोरि र शिशु स्याहार केन्द्र खोल्नु पर्दछ। यस्तो केन्द्र खोल्नेलाई सरकारको तर्फ बाट साहयता मिल्नु पर्दछ। अहिलेका नीति नियमहरु राम्रो सुरुवात भने पक्कै हो। हेर्दै जाउ जापानको यो समस्याले कस्तो मोड लिने छ।